Top 10 loại bếp điện từ hồng ngoại được ưa chuộng nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 loại bếp điện từ hồng ngoại được ưa chuộng nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Umphakathi uya ngokuya uba yisimanjemanje, abantu bakha imikhiqizo elula kakhulu futhi yesimanje enikeza ukusekelwa okuphezulu kubathengi. Isitofu sikagesi siyisibonelo sokushintsha nokunqoba ubuthakathaka besitofu segesi. Isitofu sikagesi sinomklamo wesimanjemanje futhi kanokusho, sihlanganisa imisebenzi eminingi yokuphepha, sinamandla aphezulu, futhi kulula ukusihlanza nokuyinakekela.
Emakethe namuhla, akukho ukushoda kwezitofu zikagesi njengezitofu zokungeniswa, ama-infrared cookers, … kodwa usuyazi kakade uhlobo lwesitofu esihlanganisa zombili izinhlobo ezingenhla. Uma ufuna ukwazi futhi unemibuzo, sicela uqhubeke nokulandela lesi sihloko ukuze uqonde kabanzi I-infrared induction cooker kwenzenjani!
1 Iyini i-infrared induction cooker?
1.1 1. I-Sunhouse SHB8609 . I-Infrared Electromagnetic Double Cooker
1.2 2. I-TAKA I2RT
1.3 3. I-TAKA I2B2 . I-Infrared Electromagnetic Double Cooker
1.4 4. I-CANZY CZ-930H . I-Double Infrared Induction Cooker
1.5 5. I-Bauer BE 33SE I-Infrared Induction Cooker
1.6 6. I-Sunhouse SHB – EI02 . I-Infrared Induction Cooker
1.7 7. I-Canzy CZ 67GP .I-Infrared Induction Cooker
1.8 8. I-Bauer BE 26MH Infrared Electromagnetic Double Stove
1.9 9. I-Makano MKC-200001 Infrared Electromagnetic Double Cooker
1.10 10. I-SEVILLA SV-237IC
Iyini i-infrared induction cooker?
I-infrared cooker iqondwa njengohlobo lwesitofu esihlanganisa zombili izinhlobo zesitofu se-infrared esinesimo esingunxande, ngokuvamile esihlanganisa oku-2-4 okuhlukene okukhulu nokuncane. Indlela lezi zinhlobo ezimbili zezitofu ezisebenza ngayo zihluke kakhulu.
Uma i-induction cooker ipheka ukudla ngenkundla kazibuthe, isitofu se-infrared sishisisa ukudla ngokusekelwe endandatho yokushisa ekhiqizwa amandla kagesi. Ukusebenzisa isitofu se-infrared kulula kakhulu ngoba ezinye izitofu zokungeniswa zifakwe umsebenzi we-Booster opheka ngokushesha okukhulu kodwa okhetha kancane ebhodweni, kuyilapho izitofu ze-infrared zingekho. Ngenxa yalokho, ukupheka kukhuliswa ngesikhathi nasendaweni, konga amandla kubathengi.
Nansi imikhiqizo engu-10 ephezulu edume kakhulu yeziko lokungeniswa kwe-infrared namuhla.
1. I-Sunhouse SHB8609 . I-Infrared Electromagnetic Double Cooker
Ikhwalithi ephezulu yengilazi ephezulu, amandla amahle, ukumelana nokushisa okuhle.
Ishisisa izikhathi ezi-2 kunesitofu esivamile.
I-athomu ehlukene, ingaqhumi.
Idizayini ebabazekayo enengilazi emnyama egcwele, i-minimalism nobunkimbinkimbi.
I-cooktop ye-induction isebenzisa amapuleti okushisa ethusi, ukuqina okuphezulu. Indawo yekhishi ye-infrared isebenzisa ipuleti yokushisa ye-alloy, ukusatshalaliswa kokushisa okufanayo, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqina okuvelele.
Iphaneli yokulawula ukuthinta yesimanje nesibonisi esizimele, esinemininingwane eminingi yendawo ngayinye yekhishi.
Ngomthamo omkhulu kanye nekhono lokushisisa izikhathi ezi-2 ngokushesha kunezitofu ezivamile (Amandla esitofu esingakwesokunxele: 2000W – Amandla esitofu sakwesokudla: 2000W = Amandla angempela wangempela: 3600W) yonga isikhathi sokupheka futhi yonga amandla omndeni.
Izici eziningi zesimanje njengesibali sikhathi, ukukhiya kwengane kanye nokunqanyulwa okuzenzakalelayo lapho kulayishwe kakhulu.
Ungasebenzisi ipulaki ngokuqondile emthonjeni wamandla ovamile ekhaya, kodwa xhuma nge-athomathi ehlukile.
Xem Thêm Cách Làm Mứt Tắc Dẻo Ngon Mà Không Lo Bị đắng | Muasalebang
2. I-TAKA I2RT
I-Nippon glass (eJapane).
Isitofu senziwe ngensimbi.
Kukhona umsebenzi ohlukile wendawo yokupheka ngayinye.
Idizayini yesimanjemanje, kanokusho enedizayini yengilazi ye-Nippon yaseJapan ekwazi ukumelana nokushisa, ukumelana nokushaqeka okuhle kokushisayo.
Isisu sasekhishini senziwe ngensimbi ukugwema ukugqwala.
Ibhodi lokulawula ukuthintwa kwe-Siemens IGBT yakhelwe ngokwehlukana kwesithando somlilo ngasinye, kulula ukuyisebenzisa.
Umthamo ophelele 4300W (uhhavini wesokunxele (isitofu sikagesi) 100-2300W, ihhavini elingakwesokudla (i-induction cooker) 200-2000W).
Ifakwe ngokugcwele izici zokuphepha, iqinisekisa ukuthi azikho izinkinga kubasebenzisi ezifana nalezi: ukukhiya ukuphepha kwezingane, isistimu ye-alamu yephutha uma unezinkinga, isixwayiso sokushisa okusala endaweni yokupheka, isitofu sizocisha ngokuzenzakalelayo phakathi namahora angu-2 ngemva kokusebenzisa amahora angu-24 ngokuqhubekayo,…
Dala umsebenzi ohlukene wesikhathi kuhhavini ngamunye ukuze wonge isikhathi esiningi sempilo.
3. I-TAKA I2B2 . I-Infrared Electromagnetic Double Cooker
Kuphethwe ngokuya ngekhwalithi ephezulu yaseJapan kanye nenqubo.
Indawo yengilazi ye-Ceramic imelana, imelana nokushisa, futhi ingangenwa uthuli.
Kunesistimu yokubika iphutha lapho uhlangabezana nezinkinga.
Ingxenye ngayinye eyenza umpheki wokungeniswa ikhiqizwa futhi yakhelwe ngokuvumelana nokuphathwa kwekhwalithi yaseJapane ukuze kuqinisekiswe ukuthi umkhiqizo awugcini nje kuphela isikhathi eside futhi uphephile, kodwa futhi ulula futhi uhlakaniphile.
Indawo yengilazi ye-Ceramic inomthamo omuhle wokuthwala, ukumelana nokushisa, ukumelana nothuli oluhle futhi kulula ukuyihlanza. Isisu sesitofu senziwe ngensimbi ukugwema ukugqwala ngesikhathi sisetshenziswa.
Isamba somthamo wokusebenza ngu-4000W (uhhavini ongakwesokunxele: 300 – 2000W; ihhavini yangakwesokudla: 300 – 2000W) inyusa ukusebenza kahle kokupheka ngenxa ye-Focult current edlulisela ukushisa ngqo phansi ebhodweni.
I-cooker ngayinye ifakwe iphaneli yokulawula ehlukile enokhiye bokusebenza, futhi umpheki ubuye abonise ngokuzenzakalelayo ikhodi yephutha lapho ethola ukuthi i-cookware ayihambisani nehhavini ngokosayizi kanye nokokusebenza.
Izici eziningi ezizenzakalelayo ezihlakaniphile: imodi yokuvala okuzenzakalelayo, umsebenzi wesibali sikhathi,…
4. I-CANZY CZ-930H . I-Double Infrared Induction Cooker
Ingilazi ye-Vitro Ceramic iqinile kakhulu, imelana nokushaqeka okushisayo.
Ubuchwepheshe be-inverter ye-INVERTER bonga amandla angu-40%.
Isilawuli sokuthinta esizimele seslayidela ngaphakathi ngqo ku-hob.
Ukusebenzisa amasu aseYurophu nobuchwepheshe bokuphatha ekukhiqizeni,
Ingilazi yobumba iqinile kakhulu, imelana nokushaqeka okushisayo ku-800 degrees Celsius, idlulisa kahle ukushisa futhi ayikwazi nokuklwebheka, ifaka uthuli ukuletha ukusebenza kahle kokupheka.
Ifakwe isikrini sesimanje se-LED esibonisa imisebenzi yokupheka uma ikhethiwe, ukusebenza okulula.
Umthamo wekhishi 2000W x 2400W.
Ingasetshenziswa nemithombo yamandla ehlukahlukene.
Imisebenzi eminingi ehlakaniphile: umsebenzi wenzwa yokulwa nokuchichima uphephile ukusetshenziswa. isistimu yokuvikela ukuphepha kokushisa ngokweqile, uhlelo oluhlakaniphile lwesikhathi,…
5. I-Bauer BE 33SE I-Infrared Induction Cooker
Ingilazi ye-Vitroceramic inokumelana nokushisa okuhle.
Izindawo zokupheka ezi-3 zandisa isikhathi sokupheka.
Ubuchwepheshe bokungeniswa phansi buthola ngokuzenzakalelayo indawo yokupheka.
I-Vitroceramic glass surface imelana, ukumelana nokushisa okuhle.
Izilawuli zokuthinta ze-Slide ezifihliwe.
Ukusebenzisa ubuchwepheshe bokungeniswa phansi ukuze kutholakale ngokuzenzakalelayo indawo yokupheka.
I-ovini yamagnetic efanele inomsebenzi we-Booster.
Uhlelo longa u-30% kagesi
Kufaka phakathi izindawo zokupheka ezi-3: ohhavini kazibuthe abangu-2, ihhavini ye-infrared engu-1 namasongo okushisa angu-2. Ihhavini yamandla kwesokunxele: 2000w, maphakathi 1300W, kwesokudla: 1200w – 2200W.
Izici eziningi ezihlakaniphile: Umsebenzi wokukhiya ingane, Isexwayiso sokushisa okuyinsalela, Imodi yokungeniswa kokulwa nokuchichima, Ukuvala shaqa okuzenzakalelayo lapho kushisa kakhulu.
6. I-Sunhouse SHB – EI02 . I-Infrared Induction Cooker
Amandla okushisa ashesha izikhathi ezi-2 kunezitofu ezivamile.
Elegant, idizayini yesimanje acoustical.
Izici eziningi ezihlakaniphile.
Idizayini ewubukhazikhazi enengilazi emnyama egcwele, edizayinwe ngomsindo owakhelwe ngaphakathi.
Idizayinelwe endaweni yasekhishini eyenziwe ngengilazi epholile emnyama, amandla amahle, ukumelana nokushisa nokushaqeka okushisayo kufika ku-800 degrees Celsius.
Ihitha iklanywe ngendlela ehlala isikhathi eside ehlanganiswe nosinki wokushisa ukuze ipholise kahle ikhishi phakathi nangemuva kokusebenzisa isitofu.
Amandla angu-4200W okupheka ngokushesha.
Iphaneli yokuthinta esabela kahle ngokubonisa okucacile kwezinga lokushisa okunembile.
Ifakwe izici eziningi zesimanje njengesibali sikhathi, ukukhiya kwengane kanye nokuvala shaqa okuzenzakalelayo lapho kulayishwe kakhulu ukuze kusizwe kuqinisekiswe ukuphepha kubasebenzisi kanye nokuthuthukisa ukuqina kwekhishi.
7. I-Canzy CZ 67GP .I-Infrared Induction Cooker
Izindawo zokupheka ezi-3 zandisa indawo yokupheka nesikhathi.
Ubuchwepheshe be-inverter bonga amandla.
Umsebenzi wokupheka we-Super fast Booster.
Kufaka phakathi izindawo zokupheka ezi-3 ezinendawo enkulu yokupheka kazibuthe engu-1 enamandla amakhulu: 2400W, indawo yokupheka ye-infrared engu-1 enamandla amakhulu: 2400W kanye nendawo encane yokupheka kazibuthe engu-1 enamandla angu-1800W.
Super fast ukupheka Booster umsebenzi
Ubuchwepheshe be-Smart Inverter kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
Iphaneli yesimanje yokulawula ukuthinta kwesilayidi enamazinga okushisa ayi-9 ahlukene, ukulawula okulula.
Izici eziningi ezivelele ezifana nesici sokumisa okwesikhashana endaweni yokupheka kazibuthe, isici sokushisisa ukudla,…
8. I-Bauer BE 26MH Infrared Electromagnetic Double Stove
Ifakwe umsebenzi wokupheka we-Booster kuhhavini ozibuthe ongu-1.
Iphaneli yokuthinta efihliwe.
Ikwazi ukonga u-30% kagesi.
Isitofu sihlanganisa i-oven kazibuthe engu-1 (umthamo omkhulu we-2000W, umsebenzi we-Booster osheshayo onamandla angu-2400W), i-ovini ye-infrared kagesi eyi-2-ring (umthamo we-2000W), umthamo wesamba esingu-4600W.
Idizayini yesimanjemanje, kanokusho enengilazi ye-Vitroceramic, ukumelana nokushisa okuhle.
Iphaneli yokuthinta efihliwe ecashile, kulula ukuyisebenzisa.
Ifakwe i-thermostat ephephile yekhishi, isebenzisa ubuchwepheshe bokungeniswa ukuze ihlonze ngokuzenzakalelayo indawo yokupheka.
Uhlelo longa u-30% kagesi.
Kuhlanganisa imisebenzi eminingi ehlakaniphile: Umsebenzi wokukhiya ingane, Isexwayiso sokushisa okuyinsalela, Imodi yokungeniswa kokulwa nokuchichima, Ukuvala ngokuzenzakalela lapho kushisa ngokweqile.
9. I-Makano MKC-200001 Infrared Electromagnetic Double Cooker
Iphaneli yokulawula inemiyalo ye-Vietnamese eqondakala kalula.
Izinga eliphezulu, izinto eziphephile, ikakhulukazi ipulasitiki emsulwa.
Imisebenzi ye-alamu yokuphepha ihlome ngokugcwele.
Khetha ezindaweni zokupheka ezikazibuthe noma ze-infrared ngesidingo ngasinye sokupheka. Ikakhulukazi, isitofu se-infrared singasebenzisa noma yiluphi uhlobo lwebhodwe.
Ukulawula ukuthinta, imiyalelo yesi-Vietnamese kulula ukuyiqonda. Isibonisi se-LED esikhanyayo sokuqapha okulula ngenkathi upheka.
Thatha isinyathelo sokuqala ngesikhathi sasekhishini ngesici esisebenzayo sesikhathi.
Ukupheka kuyashesha ngenxa yokusebenza kwe-Makano hob.
Thola ukupheka okusheshayo ngamandla angu-4000W.
Ukusebenzisa ubuchwepheshe okonga amandla kusiza ukukhulisa izindleko.
Ingilazi eqinile ye-vitroceramic. Ipuleti kazibuthe yethusi ehlanzekile.
Isilawuli se-IGBT saseJalimane. Ibhodi lesifunda eline-anti-umswakama, i-anti-oxidation coating.
Ukusebenzisa ipulasitiki emsulwa kuphephile empilweni.
Izitofu ze-Kanger zinamandla okuthwala okuhle, ukumelana nokushisa okuhle nokuqina okuphezulu. Lapho ithola ukuthi ayikho ibhodwe noma ibhodwe alinalutho, isitofu sizocisha ngokuzenzakalelayo.
Kukhona ukuvikelwa komehluko we-voltage kanye nesixwayiso sezinga lokushisa elingaphezulu.
Khubaza iphaneli yokulawula yesitofu ngesici.
10. I-SEVILLA SV-237IC
Ukushisa ngokungeniswa kwamagagasi kagesi, akukhiqizi intuthu, igesi enobuthi.
Indawo yokupheka isebenzisa izingxenye ze-thermoelectric ze-EGO.
Inkomba yokuphepha ephezulu.
Ingaphezulu lengilazi liboshwe ukuze kwandiswe ubuhle bekhishi. 2 izindawo zokupheka ezisebenzisa i-EGO thermoelectric components ezifanele amabhodwe namapani anezinto ezahlukene.
Umzimba wekhishi wenziwe ngensimbi engagqwali, enezikhala zokukhipha ukushisa ukuze kwandiswe ukuqina kwesitofu.
Ikhishi lihlanganisa izindawo zokupheka ezi-2 ezinomthamo ongu-2000W ngayinye, nesici esikhuthaza ukupheka esisheshayo.
Isebenza ngomgomo wokushisisa ngokungeniswa kwamagagasi kagesi, ayikhiqizi intuthu noma igesi enobuthi.
Isistimu yokuvikela ezenzakalelayo eyakhelwe ngaphakathi phezu kwezinga lokushisa, ingcindezi engaphezu komsebenzi wokukhiya ukuphepha kwengane, imisebenzi yokubonisa izibani zezinkomba, ukubonisa ukushisa okusalayo endaweni yokupheka, imodi ye-alamu ezwakalayo, qinisekisa ukuphepha okuphezulu kwenkomba kubasebenzisi.
Ngenhla kunohlu lwemikhiqizo engu-10 emayelana NEKHISHINI LAMANINGI OKWESIKHASHA EYI-INfrared EYINTANDO KAKHULU NAMUHLA. Ngethemba ukuthi izihloko ezimbalwa zizoba iziphakamiso eziwusizo kuwe. Uma udinga ukuxoxa, hlaziya, sicela usebenzise isigaba sokuphawula esingezansi.